Nwa ojii / nke ndi Africa: kedu ka esi tugharia olaedo ndu ndi Africa nke oge ochie? Ndi Black / umu Africa, cheta oge anyi bu ndi eze na ndi Queens nke uwa a ma na ukwoghari obula, n’agbanyeghi oge ogba aghara ndia, o bu n’enye anyi.
Site na: KongoLisolona: Septemba 7, 2019 00: 00 Enweghị asịsa
Dika ogo anyi nke iteta nke ndu, ime ka ndu ohuru a ma obu ino ozo ozo nke obi nkoropuru dabere n’otu anyi, anyi ghota atule ihe nile banyere akuko na ndi nke ya. , onye ìsì ma ọ bụ onye na-ehi ụra, enweghị ike ịhụ ụzọ.
N'ihi ya, ọ bụ ọrụ anyị ịchekwa ikike ndị a, Royal na nke ugwu na nkwanye ugwu maka ọdịbendị nke mara anyị na mbụ iji tinye ego maka ọdịmma obodo anyị n'ọdịnihu. Ọ dị anyị n'aka itinye okpueze na ịma mma a n'isi anyị. "Onweghi onye ga-emere anyị ya." Yabụ, ọ bụ n’oge iji bido ọrụ taa na ugbu a.
Uzo ihe omuma omuzo nke usoro uloru: nke mutara ndi ojii / ndi Africa, nke n’ewere n’otutu ihe odida anyanwu bu ihe ojoo nye ndi anyi.
Ọkt20 10: 01